Qabowga isbuucyo ayuu sii socon karaa | Somaliska
Maalmihii ugu dambeeyay Sweden waxaa ku dhuftay qabow aad u xun kaasoo la filayo in uu sii socdo ilaa 2 isbuuc sida ay sheegtay Hayada La socodka Cimilada (SMHI). Isniintii ayaa noqotay maalintii ugu qaboobeyd ee jiilaalka ayadoo waqooyiga Sweden uu qabowga gaara -42C. degmada Jokkmokk ee waqooyiga Sweden ayaa korontada ka go'day ayadoo qabowga uu marayo -40C. Qabowga ayaan ku koobneyn waqooyiga oo keliya ayadoo koonfurta laga soo sheegay ilaa -28C. Koonfurta Sweden ayaa la filayaa in daruuraha ay saarnaadaan, halka waqooyiga waloow qaboowga uu sii jiri doono hada qoraxdu ay iftiimi doonto.
Maalmihii ugu dambeeyay Sweden waxaa ku dhuftay qabow aad u xun kaasoo la filayo in uu sii socdo ilaa 2 isbuuc sida ay sheegtay Hayada La socodka Cimilada (SMHI). Isniintii ayaa noqotay maalintii ugu qaboobeyd ee jiilaalka ayadoo waqooyiga Sweden uu qabowga gaara -42C.
degmada Jokkmokk ee waqooyiga Sweden ayaa korontada ka go’day ayadoo qabowga uu marayo -40C. Qabowga ayaan ku koobneyn waqooyiga oo keliya ayadoo koonfurta laga soo sheegay ilaa -28C. Koonfurta Sweden ayaa la filayaa in daruuraha ay saarnaadaan, halka waqooyiga waloow qaboowga uu sii jiri doono hada qoraxdu ay iftiimi doonto.